Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii tani dhacdo dhowr mar waxaad waayi kartaa magdhabkaaga.
Haddii aanad noo soo dirin warbixinta hawlahaaga wakhtigi loogu talogalay, haddii aanad iman kulan ama qaab kale aanad u samayn wixi ay ahayd inaad samayso, waxaanu fariin u diraynaa qasnadaada shaqo la'aanta. Qasnadaada shaqo la'aanta ayaa ka dib kula soo xiriiraysa oo waxaad fursad u helaysaa inaad sharaxdo waxa dhacay iyo sababta.
Haddii qasnadaada shaqo la'aanta ay la tahay in aanad haysan sabab macquul ah waxay go'aaminayaan in lagu siiyo digniin ama lagaa yareeyo magdhabka.
Tani waxay keeni kartaa digniin ama yaraynta magdhawga laga helo qasnada shaqo la'aanta
aanad samayn wada-shaqan in la si wada-jir ah naloola dejiyo qorshe
aanad soo gudbin warbixinta hawlahaaga wakhtigii loogu talo galay
aanad raacin heshiisyada in nala soo booqdo ama nalala soo xiriiro
aanad raadin shaqo aanu kuu tilmaamnay
aanad si fir-fircoon u raadin shaqo
Ku saabsan qasnada shaqo la'aanta